Azo ampiasaina amin'ny fanafanana amin'ny ririnina ve ny rivotra mangatsiaka? | Lianchuang
Ny rivotra mangatsiaka dia azo ampiasaina amin'ny fanafanana amin'ny ririnina. Ny rivotra mangatsiaka dia mizara ho karazany roa: ny iray dia rivotra iray karazana fampangatsiahana tokana, ary ny iray kosa mangatsiaka sy hafanana misy vokany indroa. Ny teo aloha dia azo atao anaty vata fampangatsiahana ihany, ary ity farany tsy vitan'ny mampangatsiatsiaka ihany fa ny hafanana ihany koa, fa ny vidiny kosa lafo kokoa raha ampitahaina.
Fitandremana amin'ny fampiasana ny fiasan'ny fanafanana ny rivotra mangatsiaka amin'ny ririnina:
1. Rehefa mandraraka rano dia ampiasao rano madio araka izay azo atao mba hampihenana ny fitomboan'ny bakteria mandritra ny fizotran'ny fametahana. Ankoatr'izay, ny rano ao anaty tank dia tokony ampidirina matetika ary soloina matetika.
2. Rehefa avy niasa nandritra ny fotoana ela ny rivotra mangatsiaka, ny fihenan'ny vovoka sy ny loto dia hisy fiantraikany amin'ny habetsaky ny rivotra sy ny fihenan'ny vokan'ny sivana sy ny lambam-baravaran'ny rivotra. Ny tsara indrindra dia ny fanadiovana azy isaky ny tapa-bolana.
3. Rehefa mampiasa cooler air dia tsy tokony ho akaiky loatra ny halavirana. Raha ilaina dia diniho ny fampiasana dehumidifiers na fotodrafitrasa fanalefahana.
Ny famafana rivotra dia manana hafanana 5-6℃ ambany noho ny mpankafy tsotra. Manana fanjifana herinaratra ambany sy vidiny ambany izy ireo. Ny vokatra sasany koa dia manana ny fiasan'ny fanafanana ny rivotra ary manampy ion-dratsy. Kely habe izy ireo ary mora mihetsika. Mangatsiaka kokoa noho izanyna mpankafy, ary mandany herinaratra kely kokoa noho ny rivotra. Faharoa, ny mpankafy mari-pana dia manana asa maro samihafa (ion ratsy / fanamafisana ny rivotra, sns.), Izay mora ny mihetsika.
Farany, eto ambany maodely roa misy ny cooler sy ny heater amin'ny rivotra dia ho anao. Manantena izahay fa ho tianareo izy ireo.
Modely no. DF-AF2808Khttps://www.gdszlian.com/df-af2808k-portable-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- miaraka-oscillation-removable-drano-tanky-2-hafanana-mametraka-Eco-asa-imd-fanaraha-maso-vokatra /
Modely no. DF-AT2501KG1https://www.gdszlian.com/df-af2501kg1-tower-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- miaraka-oscillation-90oscillation-2-hafanana-toerana-Eco-asa-fanaraha-maso mikasika--vokatra /